Bhora Valve, Butterfly Valve, Tarisa Valve - DEBIEN
High yepamusoro DIN F5 vakakanda simbi wehunyambiri flange g ...
Factory yakananga chiutsi yakakwira tembiricha API 600 c ...
High-simba uye ngura nemishonga German st ...
China fekitori mutengo ductile simbi y mhando dhureni s ...
Debien arikufambira mberi nenguva, achigadzirisa zvishandiso, achinyatsoveza chiratidzo chedu, achitarisa kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, uye nekushingairira kupindura kumusika kudiwa nehunyanzvi.
Mumakore achangopfuura, Debien aona kuwedzera kwekuziva muinjiniya munda uye wepasirese munda, yakagadzika kwenguva refu uye yakagadzikana kudyidzana hukama neakakurumbira mabhizinesi uye akati wandei epasi rose mapoka muminda senge peturu, petrochemical, kuchengetedza mvura uye…
Chii chinonzi Globe Valve Uye Yakagadzirwa Rini ...
Globe mavharuvhu anomhanyiswa nechanza chemaoko uye zvakare anodzora kutenderera kwemvura. Nekudaro, ivo zvakare vanogadzira yakakura kumanikidza kurasikirwa. Kusarudza vharafu chaiyo kunodiwa, sezvo akasiyana marudzi akasiyana ...
Tarisa mavharuvhu anowanzoiswa paipi yekudzivirira kudzoka. A cheki vharuvhu ingangoita nzira-vharuvhu, kuyerera kunogona kuyerera zvakasununguka munzira imwechete, asi kana kuyerera kukatenderera, iyo val ...
Kuchengeta Uye Kugadzirisa Matipi E Butterfly ...
Iyo vharuvhu vharuvhu mhando yekuyerera inodzora chishandiso, iyo inosanganisira inotenderera dhisiki yekushandisa iyo mvura inoyerera mukuita. Mune yakatwasuka chinzvimbo chevharufuru vharafu, pane m ...
Y Type strainer Heavy-basa pombi Sefa chidzitiro I ...
DIN3352 F4 Giredhi Valve 8 Gost Ductile Kukanda Iron ...
Globe mavharuvhu Globe Kudzora Valve mvuto Contro ...